WARBIXIN: Maxaad ka og tahay inta jeer uu baaqday Shir uu dawlad gobaleedyada ugu yeeray M/weyne Farmaajo, Maxaase sababa? – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Labo sanno iyo dheeraad oo uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hayo xilka Madaxweyne-nimada Soomaaliya, waxaa baaqday kulamo uu iskugu yeeray Madaxda dawladdaha xubnaha ka ah dawladda Faderaalka, waxaana meel adag gaaray xariirka u dhaxeeya dhinacyada hoggaaminta ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda dawlad gobaleedyada shirar siyaasadeed iyo kuwa ammaan ugu yeeray in ka badan 8 jeer, waxaana shan kamid ah aan ka qeybgalin dhinacyada siyaasadda ee dawlad gobaleedyada dalka.
Inta la og yahay ilaa hadda kulamada uu Madaxda dawlad gobaleedyada ku casumay Madaxweyne Farmaajo ee baaqday ayaa gaaraya 5 jeer oo kala duwan, waxaana ugu dambeeyey sannadkan bilowga oo ay labo jeer baaqdeen kulamadaas.
Sannadkii 2018-ka 3 shir ayaa baaqatay oo kuligood looga hadli lahaa arrimaha siyaasadda, Ammaanka iyo Doorashooyinka 2020-ka, khuseeya oo ay yeelan lahaayeen Madaxda dawladda Faderaalka iyo madaxda dawlad gobaleedyada dalka.
Xariirka u dhaxeeya Madaxtooyada Soomaaliya iyo dawlad gobaleedyada ayaa ahaa mid xun tan iyo bilowgii Xukuumadda Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre, loo arkayey mid yoolkeedu yahay sidii loola dagaalami lahaa dawlad gobaleedyada.
Kulanka ugu dambeeya ee baaqday maanta oo looga hadli lahaa Arrimaha Ammaanka Qaranka ayaa ahaa mid lahaa muhiimad gaar ah, waxaana kulankan cadaadis ku saartay Madaxtooyada Soomaaliya in la qabto dawladdaha saaxiibka la ah Soomaaliya.
Laakiin baaqashadiisa ayaa ka dhigan fariin aan wanaagsaneyn oo dawladda Faderaalka ku soo laaban doonto, gaar ahaana Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iclaamiyey shirkan ayay tahay cidda ugu badan ee ay dhabarka ku tahay talaabadan.
Madaxda Puntland waa in ay shaxda siyaasadeed si ilbaxnimo ay ku dheehan tahay u dheelaan oo aanay dalkan weli liicaya qar ka tuurin. Sida la wada ogsoon yahay Soomaaliya waxaa isku salliday oo nacab sokeeye ku noqday huwanta mooryaaneed iyo heegada woqooyi galbeed ee soo hurisa. Halis xun ayay Soomaaliya ku yihiin haddii aan shaxda siyaasadeed inta lagu foororiyo fuurada lagu faruurin.
Huwantan aan magacaabay ee ay dabada ka soo riixayaan shirkado iyo dawlado tuuganimada suuqa madoow ee caalamka ka dhex kalluumaysta waxaa uu qasadkoodu yahay in aanay Soomaaliya dib lugaheed iskugu taagin oo qalalaase uun ay ku sii jirto inta ay iyagu awood buuxda ee Xamar ku la wareegaan ka hananayaan. Waa sababta ay Muqdisho u xasili kari la’dahay. Hubka ugu weyn ee ay u adeegsanayaan waa Puntland iyo Jubbaland.
Haddaba maadaama Madaxweynaha Federaalka Mudane Farmaajo weerar qabyaalad ku salaysan lagu hayo mar haddii uu yahay nin musuq maasuqa iyo khiyaanada qaran ka nadiif ah ee dalkiisa iyo dadkiisa daacad u ah, madaxda Puntland iyo Jubbaland in ay iyagu na dhankooda ka soo curyaamiyaan waxay ku tahay ardaalnimo, daciifnimo iyo damiir xumo tii oogu xumayd. Waxaa uu waajibkoodu yahay in ay Farmaajo garab, gaashaan iyo gabbood ba u noqdaan wax kasta oo ay xukuumadda federaalka ka qabaan oo aanay isaga iyo dalka ba cadawga ku hareereysan u jabinin cakuyee!